Good Will Hunting (1997) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားက IMDB- 8.3/10 နဲ့ RT- 97% တောငျ Rating ရထားတဲ့ ဇာတျကားပါ..ရုပျရှငျပရိတျသတျတှကေတော့ “Good doesn’t describe” (ကောငျးတယျ ဆိုတဲ့စကားလောကျနဲ့ မပွညျ့စုံဘူး)လို့ ပွောကွတဲ့ဇာတျကားပါ
ထူးခွားတာက ဒီကားရဲ့ဇာတျညှနျးကို ဇာတျကားရဲ့ အဓိကနရောက သရုပျဆောငျထားကွတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ဇာတျလိုကျကြျောကွီး မကျဒမှေနျ(Matt Damon)နဲ့ ဘနျအဲဖလကျ(Ben Affleck)ကိုယျတိုငျ ရေးထားတာပါ
သူတို့နှဈယောကျက ဇာတျညှနျးအကယျဒမီဆုရ၊ Robin Williams က အကယျဒမီဇာတျပို့ဆုနဲ့အတူ အခွားရုပျရှငျဆု ၂၂ ဆု ဆှတျခူးထားတဲ့ ဇာတျကားပါ ——–
ကမ်ဘာကြျောသင်ျခြာပါရဂူကွီးတှေ နှဈနဲ့ခြီပွီး သကျသပွေဖို့ကွိုးစားရတဲ့ သင်ျခြာပုစ်ဆာမြိုးတှကေို တဈထိုငျတညျးနဲ့ သကျသပွေနိုငျတဲ့ ဆယျကြျောသကျ အရှယျ ဂဈြကနျကနျကောငျလေးတဈယောကျ မိဘမဲ့ ခွဦေးတညျရာမဲ့ ဆိုးဖျောဆိုးဖကျတှနေဲ့မူးအောငျသောကျ ဘဝကို ကွုံသလိုဖွတျသနျး
ဒါပမေယျ့ သူဟာ ဂြီးနီးယကျဈတဈယောကျ သူ့ရဲ့ဦးနှောကျက Genius-level IQ နဲ့ သူဟာ သူ့အငျပါယာမှာ သူ့ဥပဒနေဲ့ နထေိုငျတဲ့သူ သံယောဇဉျတှယျရမှာကိုကွောကျတယျ လူတှရေဲ့ သမားရိုးကအြတှေးအချေါတှကေို ရှံတယျ ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့အရညျအခငျြးကို Field’s Medal (သင်ျခြာပါရဂူ)ဆုရှငျပရျောဖကျဆာတဈယောကျက သတိထားမိသှားတယျ….
ဖွဈနိုငျရငျအညှနျးကိုတဈလုံးမှမရေးဘဲတငျလိုကျခငျြတာ….ဘာလို့ဆို ဒီကားရဲ့ရသတှဟော ကြှနျတေျာ့ရဲ့ခပျညံညံရေးသားခကျြအောကျမှာ မှေးမှိနျသှားမှာစိုးလို့ပါ…
ဒီဇာတ်ကားက IMDB- 8.3/10 နဲ့ RT- 97% တောင် Rating ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ..ရုပ်ရှင်ပရိတ်သတ်တွေကတော့ “Good doesn’t describe” (ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့စကားလောက်နဲ့ မပြည့်စုံဘူး)လို့ ပြောကြတဲ့ဇာတ်ကားပါ
ထူးခြားတာက ဒီကားရဲ့ဇာတ်ညွှန်းကို ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကနေရာက သရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး မက်ဒေမွန်(Matt Damon)နဲ့ ဘန်အဲဖလက်(Ben Affleck)ကိုယ်တိုင် ရေးထားတာပါ
သူတို့နှစ်ယောက်က ဇာတ်ညွှန်းအကယ်ဒမီဆုရ၊ Robin Williams က အကယ်ဒမီဇာတ်ပို့ဆုနဲ့အတူ အခြားရုပ်ရှင်ဆု ၂၂ ဆု ဆွတ်ခူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ ——–
ကမ္ဘာကျော်သင်္ချာပါရဂူကြီးတွေ နှစ်နဲ့ချီပြီး သက်သေပြဖို့ကြိုးစားရတဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာမျိုးတွေကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ သက်သေပြနိုင်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးတစ်ယောက် မိဘမဲ့ ခြေဦးတည်ရာမဲ့ ဆိုးဖော်ဆိုးဖက်တွေနဲ့မူးအောင်သောက် ဘဝကို ကြုံသလိုဖြတ်သန်း
ဒါပေမယ့် သူဟာ ဂျီးနီးယက်စ်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ဦးနှောက်က Genius-level IQ နဲ့ သူဟာ သူ့အင်ပါယာမှာ သူ့ဥပဒေနဲ့ နေထိုင်တဲ့သူ သံယောဇဉ်တွယ်ရမှာကိုကြောက်တယ် လူတွေရဲ့ သမားရိုးကျအတွေးအခေါ်တွေကို ရွံတယ် ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းကို Field’s Medal (သင်္ချာပါရဂူ)ဆုရှင်ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်က သတိထားမိသွားတယ်….
ဖြစ်နိုင်ရင်အညွှန်းကိုတစ်လုံးမှမရေးဘဲတင်လိုက်ချင်တာ….ဘာလို့ဆို ဒီကားရဲ့ရသတွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ခပ်ညံညံရေးသားချက်အောက်မှာ မှေးမှိန်သွားမှာစိုးလို့ပါ…
On the Balcony ( 2019 )
The Concubine – Link 1